Dallada Dhalinyarad Puntland oo Xafiis ka Furtay Garowe – Radio Daljir
Oktoobar 27, 2015 5:06 b 0
Talaado, Oktoobar 27, 2015 (Daljir) —Munaasabadaan lagu furayey xafiiska dalladda dhalinyarada Puntland ee PYAN oo uu xariga kajaray wasiirka shaqada, shaqalaaha, dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Puntland ayaa waxaa ka qaybgalay xubno katirsan golaha xukuumadda, madaxa xafiiska madaxa banaan xuquuqul Insaanka, qurbajoog iyo qaybaha dhalinyarada Puntland.
Qaar kamid ah mas’uuliyiinta ka qaybgalay munaasabadda ayaa waxa ay madaxda dalladda ku ammaaneen dedaalkii ay u galeen furitaanka xafiiskan cusub, waxaana ay iyo ku booriyeen inay wadashaqayn yeeshaan, kana shaqeeyaan horumarka dalka.
Agaasimaha guud ee dhalinyatada iyo ciyaaraha Axmed Cabdalla Tigaana iyo gudoomiyaha xafiiska madaxa banaan ee xuquuqul Insaanka Maxamed Yuusuf Cali ayaa wadajir ugu balanqaaday madaxda dalladda inay lashaqayn doonaan.
Aways Axmed Sardheeye gudoomiyaha dalladda dhalinyarada Puntland oo lahadlay warbaahinta ayaa kahadlay furitaanka xafiiska cusub ee dalladda oo uu sheegay inuu maanta kadib u furanyahay dhammaan dhalinyarada reer Puntland.
Ugu dambayntiina wasiir kuxigeenka arrimaha gudaha Cabdullaahi Xaashi Qoob-deero ayaa ku dheeraaday muhiimadda wadashaqaynta dhalinyarada iyo in dalka looga faa’iideyo muruqooda iyo maskaxdooda, wuxuuna codsaday in lala shaqeeyo.
Furitaanka xafiiskaan cusub ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan 20 xubnood oo kasocdey 9-ka dalladood ee gobolka Puntland iyo dalladda Y-Peer ay soo doorteen gudoomiye iyo kuxigeenkiisa dalladda PYAN gaarsiin doona doorasho ballaaran.